Jamaika: Vetivety Dia Mahazo Dolara Amin’ny Fanatsarana Ghetto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2017 13:19 GMT
(Marihina fa tamin'ny 2 Janoary 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Naka sary ireto zatovovavy ireto i Ria Bacon tamin'ny Desambra 2006 tao amin'ny Lalàna Barbican tany Kingston, Jamaika. Araka ny fanazavany tao amin'ny bilaoginy hoe:
Ny herinandro talohan'ny Krismasy, maro tamin'ireo faritra mahantra ao Kingston no nanao fanatsarana vonjimaika, raha nidina teny amin'ny lalàn'ny mpandeha an-tongotra ireo mponina an-jatony ao an-toerana ary nandoko ny sisiny tamin'ny lokorano fotsy. Tsy noho ny fientanana tamin'ny fireharehan'ny vahoaka akory no nanosika azy ireo hanao izany, fa noho ny fampanantenana ny asa iray andro, izay matetika ny mpanao politika eo an-toerana no manakarama. Ho an'ny maro, anisan'ireo andro vitsy hikaramana isan-taona izany. Tsikaritra fa tsy mahagaga raha vehivavy ny ankamaroan'ny mpiasa.
Na dia inoana aza fa ankasitrahana ny 1000$ Jamaikana isan'andro amin'izao vanin-taona izao, dia tsy dia mahavita inona loatra izany mba hisorohana ny kolontsain'ny fanangonana mpifidy ara-politika ary azo antoka fa tsy manome tombony maharitra ho an'ny tsirairay na ny vondrom-piarahamonina akory.
Araka ny filazan'ny ohabolana Jamaikana-Shinoa hoe:
Omeo ny tovovavy iray ny borosy ary ‘handoko mandritra ny iray andro izy. Omeo azy ny fanabeazana, ny fampindramam-bola madinika, ny tontolo madio sy azo antoka
Ô lety e! Omeo azy fotsiny ilay borosy, henonao izany ?!
Ny volana Oktobra 2007 ny fifidianana parlemantera any Jamaika .